I-fiber Optical Splice yokuVala abavelisi kunye nabaxhasi - China iFibre Optical Splice yokuValwa kweFektri
Ukuvalwa kwe-fiber optic splice (FOSC) enye ebizwa ngokuba yi-fiber optic splicing ukuvalwa, sisixhobo esisetyenziselwa ukubonelela ngendawo kunye nokukhuselwa kweentambo ze-fiber optic ezihlanganiswe ndawonye ngexesha lolwakhiwo lwenethiwekhi ye-fiber optic network. Ingasetyenziselwa phantsi komhlaba, i-eriyeli, ukunyusa udonga, ukunyusa ipali kunye neendlela zokufaka indlela.
Ngokutsho kwezicelo ezahlukeneyo, zimbini iintlobo zokuvalwa kwefayibha kwimarike yabasebenzisi ukuba bayikhethe: Ukuvalwa kwefonti ye-fiber optic kunye nokuvalwa okuthe nkqo kohlobo lwefibre optic.
Ukuvalwa kwe-fiber optic yohlobo oluchanekileyo kufana nebhokisi ethe tyaba okanye eyindilinga, olu hlobo lokuvalwa lusetyenziswa kakhulu ekonyuseni eludongeni, ekunyukeni nasekungcwatyelweni phantsi komhlaba. Vertical uhlobo ifayibha optic ukuvalwa ekwabizwa ngokuba dome uhlobo ifayibha optic ukuvalwa, kufana idome kwaye ngenxa imilo yedome yenza kube lula ukuba isetyenziswe kwiindawo ezininzi.
IJear FOSC yenziwe ngebanga lokuqala leplastikhi enganyangekiyo ye-UV kwaye yatywinwa ngesitywina eqinisekisa imeko yemozulu kunye nomhlwa, enika ukusebenza ngokuzithemba nokuba kungaphezulu okanye kungcwatyelwe phantsi komhlaba ngexesha lolwakhiwo lwenethiwekhi ye-FTTX.
Ukuvalwa kwe-fiber optic splice kunokufakwa ngeebholithi okanye imitya yentsimbi engenasiphelo ngokulula, zonke izinto ezifanelekileyo ziyafumaneka kuluhlu lweemveliso zejera, nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana neenkcukacha ezizayo.
Ukuvalwa kwefiber optic splice, FOSC-2D, amalungu angama-48
Ukuvalwa kwe-fiber optic splice, i-FOSC-3, amalungu angama-96
Ukuvalwa kwefiber optic splice, FOSC-4 (144)
Ukuvalwa kwe-Ftth Fibre optic splice, FOSC-5 (96)
Ukuvalwa kwefiber optic splice, FOSC-8 (12), 8 fibe ...
Ukuvalwa kwefiber optic 4 ngokudibeneyo, i-FOSC-9 (4)
Ukuvalwa kwefiber optic splice, FOSC-7 (96)
Ukuvalwa kwefiber optic splice, FOSC-6 (96)